Weriyaasha Soomaaliyeed Oo Dowlada Kala Kulmay Arin Aysan Ka Filanaynin - Awdinle Online
Weriyaasha Soomaaliyeed Oo Dowlada Kala Kulmay Arin Aysan Ka Filanaynin
April 21, 2020 (Awdinle Online) –Dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay waxaa sii xoogeestay caburinta ay weriyaasha kala kulmayaan dowladda Soomaaliya iyo maamul gobaleedyada dalka ka jira qaarkood.
Weriyaal badan ayaa muddo ka yar 60 cesho loo geestay jirdil, xarig, hanjabaad iyo cabsi gelin waxayna weriyaashaan kala joogaan magaalooyinka kala ah Muqdisho, Baydhabo, Kismaayo iyo Jowhar.
Weriyaasha magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa ugu badan ee dhibaatada kala kulma ciidamada ammaanka, waxaana wali xabsiyada ku jira weriyaal aan wali maxkamad la soo taagin islamarkaana aan la ogeyn dambiyada loo heesto.
Qaar kale ayaa sidoo kale lasii daayey kadib maalmo la hayey, halka qaarna si kooban inta loo xiro isla maalinkiiba lasii daayo.
Waxaa sidoo kale saddex maalmood ka hor lasii daayey tifaftiraha warbaahinta Goobjoog Cabdicasiis Axmed Gurbiye.
Sidoo kale Gaalkacyo iyo magaalooyin kale ayaa kamid ah meelaha lagu dhibaateeyo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Xaaladda ayaa u muuqata mid ka sii dareysa waxaana sii kordhaya cabsida saxafiyiinta Soomaaliyeed.
Inkasta oo dowladda Soomaaliya horey loogu eedeeyey caburinta saxaafadda, haddana waxaa muuqata in ayada iyo maamul goboleedyada taageersan ay bilihii dhowaa laba-laabeen beegsiga suxufiyiinta.
Ma cadda sababta xilliga kordhisay beegsiga, hase yeeshee dadka qaar ayaa ku macneeyey in la doonayo in lasii aamusiyo saxaafadda ka hor doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan bilaha soo socda.
Previous articleQarax miino oo lala eegtay Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda
Next articleEuropean Union warns freedom of expression pandemic in Somalia